ပါးလွှာသောညှပ်များသည်ဆံပင်များကျွတ်စေသလား။ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကို Frizzy - Japan Scissors
ကတ်ကြေးပါးလွှာခြင်းကိုမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ "ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသလား"၊ "ဆံပင်ညှပ်ဆရာကဆံပင်ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးကိုငါသုံးခွင့်ပေးသင့်လား။ "
အတွေ့အကြုံရှိသောဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ် ဦး သည်ဆံပင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် frizzy ဆံပင်အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သမျှကို၎င်း၊ သင်၏ဆံပင်ပေါ်ရှိ texturizing သို့မဟုတ် thinning shear ကိုသုံးသင့်သလား။
ဆံပင်ညှပ်တွင်အမြှုပ်လေးများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ရာသီဥတုမှဆံပင်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဆံပင်များခြောက်သွေ့လာပြီးပျက်စီးသွားသောအခါ၎င်း၏အသွင်အပြင်သည်ထင်းရှူးပင်နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသည်၊ ကြမ်းတမ်းသည်။
ဆံပင်ရိုးသည်ပျက်စီးသွားပြီးပွင့်ထွက်နိုင်ပြီးအကျိုးရှိသောအစိုဓာတ်ကိုလွတ်မြောက်စေသည်။ သို့သော်လေထုမှအစိုဓာတ်သည်ဆံပင်ရိုးသို့ ၀ င် ရောက်၍ ၎င်းအားရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပုံသဏ္န်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒါကအေးဆေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
သင်၏စတိုင်လ်ဆရာသည်သင့်ဆံပင်ကိုပုံမှန်ကတ်ကြေးဖြင့်ပြတ်ပြတ်သားသားဖြတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ တုံးဖြတ်ခြင်းသည်သင်အလွှာကိုရပ်တန့်ရန်မဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့်ဆံပင်အဖျားကိုထိန်းဖို့အတွက်ဆံပင်အရင်းမှာအလေးချိန်အနည်းငယ်လိုပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖြင့်ညှပ်ထားသည် ဆံပင်ပါးလွှာကတ်ကြေး ဖရိုဖရဲဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကလစ်များကြောင့်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကျိုးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါသည်။
ဆံပင်ကတာဝန်ယူတယ်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီမှာမတူညီတဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေရှိကြပါတယ်။ သူတို့သည်ကွဲပြားသောနှုန်းဖြင့်ကြီးထွားသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်မလိုလားအပ်သောဆံပင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤ strands များသည်အခြား strands များ၏စုစုပေါင်းအရှည်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်။
ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါးလွှာတဲ့အမွှေးညှပ်စက်တွေကဘာတွေလဲ၊ အဲဒါတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ ပါးလွှာသောလှီးဖြတ်ဓားများသည်သူတို့၏ဓါး၏တစ်ဘက်၌သွားများပါသောကတ်ကြေးဖြစ်သည်။ ဓါး၏အခြားတစ်ဘက်သည်ဖြောင့်နေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်ဆံပင်ကိုဖြတ်ရန် (သို့) နှစ်သက်စေသောလိုင်းများကိုပျော့ပြောင်း/ရောစပ်ရန်သုံးနိုင်သည်။ ဤသွားများတွင်သေးငယ်သည့် groove များပါ ၀ င်သည်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာမှန်ကန်သောထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့ဆံပင်တွေကျွတ်စေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရှိတယ်။ ၎င်းသည်စုပ်ယူမှုသေချာစေရန်စိုစွတ်သောဆံပင်ပေါ်တွင်လိမ်းသင့်သည်။ ဆံပင်ကိုပွတ်တိုက်မယ့်အစားခေါင်းကိုပတ်ပြီးမျက်နှာသုတ်ပုဝါတစ်ထည်ပေးပါ။
အချို့လူများသည်သဘာဝအတိုင်းဆံပင်ကောက်သည်။ သင်၏ ဦး ရေပြား၌သဘာဝအဆီများသည်ဆံပင်ဖြောင့်သောဆံပင်ကဲ့သို့ထိရောက်မှုမရှိသောကြောင့်ဤဆံပင်သည်ခြောက်သွေ့သည်။ အထူးသဖြင့်ဆံပင်တစ်ချောင်းချင်းစီကိုသတ်မှတ်ထားသောကောက်ကွေးပုံစံဖြစ်အောင်စုစည်းထားခြင်းမရှိသောအခါသဘာဝအလျောက်ဆံပင်များဖွံ့ဖြိုးလာစေသည်။
ဒါကမင်းရဲ့ဆံပင်တွေကိုပူအိုက်တဲ့အခါကျွတ်စေလိမ့်မယ်umisummer နွေရာသီနေ့များ (သို့မဟုတ်နွေးသောတစ်နေရာတွင်အားလပ်ရက်တွင်)
ခြောက်သွေ့သော Cuticle သည်ကြမ်းတမ်းလာပြီး h နှင့်ထိတွေ့သည်umidity ။
Humidity သည်ဆံပင်များကိုခြောက်သွေ့စေသောကြောင့်အပြင်ဘက်အလွှာသည်လေထုမှအစိုဓာတ်ကိုစုပ် ယူ၍ ဖောင်းကားစေသည်။
ရေနွေးသည်ဇင့်ကဲ့သို့အာနိသင်ရှိသည်umidity ။ ဒေးဗစ်ကဤအရာသည်သင်၏ဆံပင်နှင့် ဦး ရေပြားကိုအကျိုးပြုအဆီဓာတ်များကိုထုတ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သောဓာတုပစ္စည်းများ (သို့) ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများသည်ဆံပင်၏သဘာဝအဆီများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ မင်းရဲ့သဘာဝအဆီတွေကမင်းဆံပင်ကိုချောမွေ့စေတာမို့ဖယ်ရှားလိုက်တာကမင်းဆံပင်ကိုကျွတ်စေနိုင်တယ်။
အလွန်အကျွံအရောင်ချွတ်ခြင်း (သို့) အရောင်ချွတ်ခြင်းသည်အမိုးနီးယား (ammonia) ပါဝင်မှုမြင့်သောဖော်မြူလာများကြောင့်ပျက်စီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထိရန်ကြမ်းတမ်းသည်၊ ၎င်း၏တောက်ပမှုကိုခိုးယူခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သူမကအပူဒဏ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်အပူခံပုံစံတွေအတွက် conditioner နဲ့အဆီတွေကိုကြည့်ဖို့လည်းသူမကအကြံပြုတယ်။
သင်၏ဆံပင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏ဆံပင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏ဆံပင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်ထက်ပိုလျှော်ရန်အကြောင်းမရှိကြောင်း Davis ကပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းဒီလိုလုပ်ရင်ခေါင်းလျှော်ရည်ကဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့ပြီးကြွပ်ဆတ်စေမယ်၊ အထူးသဖြင့်အမြှုပ်ထလာရင်။
Waldman ကရှင်းပြသည်မှာသင့်ဆံပင် (သို့) မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုအခြောက်ခံခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသောပွတ်တိုက်မှုသည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော frizz ကိုဖြစ်စေသည်။
ဆံပင်ကောက်ခြင်းကိုသင်သိသောနည်းစနစ်ဖြင့်ဖြတ်နိုင်သည်။ မင်းဆံပင်ကိုကွေးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းသိဖို့လိုတယ်။ ဖြောင့်ထားသောဆံပင်ကိုဖြောင့်လိုက်လျှင်စီမံရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖြေရှင်းရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာနိုင်သောအဓိကပုံစံများသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။
ဖြောင့်သောဆံပင်အတွက်တူညီသောဆံပင်ပုံစံကိုဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မင်းဆံပင်ကိုအသံအတိုးအကျယ် (သို့) လျှော့ချခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုသင်စိတ်ကူးနှင့်မြင်ယောင်ကြည့်ရမည်။ ဆံပင်ကောက်ကောက်သည်သဘာဝအတိုင်းကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြတ်တောက်ရန်လိုသည်။
ပုံစံနှင့်လှုပ်ရှားမှုထည့်ခြင်းဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။ လူတော်တော်များများကမင်းအသံအတိုးအကျယ်ထပ်တိုးဖို့ဆံပင်တိုတွေကိုဖြတ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့်၊ မင်းဆံပင်ကိုအသံအတိုးအကျယ်နဲ့ဖြတ်ဖို့မလိုပါဘူး၊ သိပ်သည်းဆနဲ့အသံအတိုးအကျယ်အလုပ်ကမင်းလိုအပ်တာအားလုံးနားလည်တယ်။ မင်းဆံပင်ရဲ့အတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မင်းပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးကိုလက်လှမ်းလိုက်နိုင်တယ်။ ဤအရာသည်ကိစ္စတော်တော်များများတွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ပုံစံပိုပြသနာများကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအမြောက်အများကိုလျှော့ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပါးလွှာသောညှပ်ခြင်းသည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသောဆံပင်ပုံစံကိုလျှော့ချခြင်း၏ဆိုးဝါးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်။ ဆံပင်ကောက်ကောက်အမြောက်အများကိုလျှော့ချရန်သင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုလျှော့ချပေးပြီးမှန်ကန်သောနေရာများသို့ရွေ့လျားမှုကိုထည့်ပေးသောတိကျသောထိန်းချုပ်ဖြတ်တောက်မှုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Tunnel Cut သည်အတိအကျလုပ်ဆောင်သည်။
Frizzy ဆံပင်နှင့်ပါးလွှာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးမှတ်ချက်။
ဖောက်သည်တွေလိုအပ်တဲ့အခါသူတို့ကိုငါသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘယ်အချိန်နဲ့ဖြစ်မလဲ။ ဆံပင်ကိုအရမ်းမြင့်အောင်ဘယ်တော့မှမထားပါနဲ့။
ကျွမ်းကျင်တဲ့ stylist တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်ဆံပင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သော stylist တစ် ဦး မရနိုင်ပါ။ ဝိုင်းမေးပါ။
Stylists များ၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်သည်ထူးခြားသည်ကိုသတိရပါ။ ဆံပင်ကောက်ကောက်သည်ဖြောင့်သည်မဟုတ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုညီညာနေစေရန်အတွက်ညီညာစွာချုံ့ရန်လိုလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်၊ မကောင်းဘူး။ သင်သည်သင်၏ဆံပင်ကိုပါးလွှာသောကြောင့်၎င်းကိုဆံပင်ပိုရှည်စေပြီးကွဲပြဲခြင်း (သို့) ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုပိုခံစားရစေလိမ့်မည်။ ကျွမ်းကျင်သော stylist သည်သင်၏ဆံပင်ကိုဖြတ်နိုင်သင့်သည်။ သင်၏ဆံပင်များကိုဆုပ်ကိုင်ပါ။
Scissor Hub Australia မှအကောင်းဆုံးပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုလမ်းညွှန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
Thinning Scissor Australia online thinning shears ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
ဆံပင်ပါးလွှာစေသောအကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ရန် USA မှလမ်းညွှန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
ကတ်ကြေးပါးလွှာရန် WikiHow ပုံလမ်းညွှန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုမည်သို့သုံးရမည်ကို Google ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
ဇွန်အိုး အောက်တိုဘာလ 07, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2